Egwuregwu kachasị mma | Akụkọ akụrụngwa
Egwuregwu kachasị mma
Nsogbu? You chọrọ ịnwale egwuregwu ọhụrụ n’emebughị penny? Echegbula, anyị na-ewetara gị nke a nkebi nke nkwanye sitere na enwere ike igwu egwuregwu yabụ ị nwere ike ịchọpụta utu aha kachasị mma igwu egwu na-ahapụghị iri puku euro iji belata ụtọ ha.
Azụmahịa azụmaahịa a bidoro iji ya mee ihe na MMO na-achọ ịdọta uche nke ndị egwuregwu nkịtị, tupu egwuregwu ndị ọzọ nwere ibu dị ukwuu ma jikwa ya. Na mbu, egwuregwu ndị a dị mfe ma nwekwaa ihe pere mpe, mana taa enwere aha dị oke mkpa nke na-agbachitere obere azụmaahịa yana gụnyere mgbasa ozi n'ime egwuregwu ahụ. Ruo taa, ha emegogo ahụ ọbụna na njikwa ndị na-achọghị mgbanwe, yabụ ọtụtụ ụlọ ọrụ amalitela inwe mmasị n'ụdị a egwuregwu efu.
World of tankị
Nke ndị ụlọ ọrụ Belarus mepụtara, World of tankị bụ nnukwu onye egwuregwu nke ọdịdị yiri agha, dịka enwere ike ịkọwa ya n'aha ya, ebe ndị tankị bụ ndị na-ahụ maka ọgụ na egwuregwu dị iche iche. Anyị nwere ike igwu egwu na otu ndị mmadụ 15 weghara ọkọlọtọ, isi onye iro ma ọ bụ ọnọdụ ọgụ kpochapụla. Na mgbakwunye, enwere usoro ọzụzụ, asọmpi, yana ọbụlagodi ikike ndị egwuregwu nwere iji nwee agbụrụ na ezinụlọ ha.
Enwere karịrị tankị 240 n'ezie dabere na ụdị nke mkpochapụ -ma ọ bụghị - Soviet Union, United Kingdom, USA, Germany, France na China. Egwuregwu ahụ na-enweta mmelite ole na ole mgbe niile gụnyere ọtụtụ ụgbọ ala na maapụ. Dị na ha abụọ PC na a mbipụta pụrụ iche maka Xbox 360 -mgbe naanị gold-.
Ndi mmadu: Gbagoo
Ndi mmadu: Gbagoo bụ a free igwu egwu omume na onye mbụ wee wepụ akụkọ sayensị, ebe anyị nwere ike ịga n'ihu n'ụzọ abụọ: ma ọ bụrụ na ọsụsọ nke mbata anyị site na ịnweta ahụmịhe enwetara iji kwalite ma ọ bụ melite akụrụngwa anyị-ọkachasị ngwa ọgụ- ma ọ bụ Anyị nwere ike iji kaadị kredit zụta jiri ego siri ike iji nweta uru ngwa ngwa.
Usoro evolushọn na - enyekwa gị ohere itinye isi ihe gbasara njirimara ndị ọzọ na agwa ahụ yana enwekwa ụgbọ ala ịkwọ ụgbọ ma mee kaffir. Usoro nhazi nwere ike ịdị ka nke Oku ọrụ, ọbụlagodi na cam na-egbu egbu na egwuregwu ahụ, anyị nwere ike ịnweta utu aha dị iche iche na ọkwa dị iche iche ma ọ bụrụ na anyị ezute ụfọdụ ebumnuche, dị ka iru ụfọdụ isi nke isi agba.
Njikọ nke Akụkọ Ifo
Njikọ nke Akụkọ Ifo, ma ọ bụ nke a na-akpọkarị akpa ọchị, bụ otu egwuregwu egwuregwu kachasị ewu ewu na nke na-eri ahụ n'afọ ndị na-adịbeghị anya. Njikọ nke Akụkọ Ifo bụ egwuregwu na edemede nke Starcraft, ebe emere ihe na ufodu ihe emetutara atumatu na ikpokọta MMO. Ebumnuche onye ọkpụkpọ ahụ bụ ịgafe map iji bibie ya Nexus ndorodoro ma gbochie ya ime nke gị. Ọ nwere ike ịdị ka ihe dị nfe, mana mmejuputa iwu ahụ adịghị mfe, n'ihi turrets ma ọ bụ ndị iro na-achịkwa CPU na-ebili, na mgbakwunye na ndị mmadụ na-ama ya aka.
Inweta ahụmịhe site na isonye na agha dị mkpa iji nweta isi ahụmịhe ma melite njirimara nke agwa anyị, n'agbanyeghị na n'ọtụtụ egwuregwu nke ịkpụ a, anyị nwekwara ike ịzụta mkpụrụedemede ma ọ bụ mmelite na ezigbo ego. Njikọ nke Akụkọ Ifo O doro anya na ọ bụ otu n'ime ihe ịga nke ọma na nkọwapụta nke ụdị ya n'afọ ndị na-adịbeghị anya.
2 na mbara ala
2 na mbara ala nwere ike-atụle a remake nke mbụ aha na mma ndịna, ma n'elu niile pụta ìhè na o nwere nke nnukwu odide nke a nwere ike igwu n'otu map n'otu oge. Ọ bụ onye na-agba égbè mbụ nke na-egosipụta omume n'akụkụ anọ ya niile yana a nnukwu maapụ nke enwere ike iwere dika kọntinenti.
Onye ọkpụkpọ ahụ na-arụ ọrụ nke otu n'ime ndị otu nke òtù atọ ahụ na-alụ ọgụ maka ọla kọpa ahụ ma na-alụ ọgụ iji rute ntọala ndị iro nke ndị iro ahụ ma were ha gbakwunye ha n'ókèala nke otu nke ya. Enwere ngwa agha dị iche iche na ụgbọ ala dị iche iche, agbanyeghị na ihe ahụ adịchaghị njọ - ị ga-anwụ ọtụtụ oge na egwuregwu ole na ole mbụ - mana ọ bụ ihe na-atọ ụtọ. Dị na PC ga-abiakwa PlayStation 4.
Echiche thgha Team Ebe e wusiri 2 bụ kpochapụwo nke valvụ na onye ọ bụla, ma ọ dịkarịa ala, kwesịrị ịnwale ya ma kpọọ egwuregwu, ọ bụrụgodị na ọ bụ site na ịmata ihe. Ọ dị afọ ole na ole, mana ọ na-enweta mmelite oge niile nke na-eme ka ọ dị ọhụrụ ma na-agba ndị mmadụ ume ka ha nọgide na-egwu egwu - ndị agbụrụ ya enweghị ike ịgwụ. Maka ndị na-amaghị, Team Ebe e wusiri 2 bụ a fps nke esemokwu na ọnwụ na eserese dị iche iche yana ụdị edemede dị iche iche - dọkịta, sniper, wdg.
N'ebe a enweghi nkpirisi opekata mpe, ọ bụ naanị maka ịnụ ụtọ ịdọpụta akpalite na-akpalite. Ọ nwere usoro dị mgbagwoju anya nke mmelite na onyinye nwere ike ịnye, ọbụlagodi iwebata micropayments adịghị mma nke ọma na ndị egwuregwu bọọlụ, ha adịghị mkpa ịnọdụ ala ma nwee ọmarịcha ịma mma nke Team Ebe e wusiri 2.
Ka ọ dị ugbua nkeji izizi nke egwuregwu efu akwadoro. Enweghi obi abụọ na anyị ga-alaghachi na ọpụrụiche ọhụụ na egwuregwu ndị ọzọ iji kwado gị yana ị nwere ike ịnụ ụtọ na-enweghị emerụ akụ na ụba gị. Hụ gị n'ime Mundi Videogames.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Home » Videogames » Egwuregwu kachasị mma
Otu esi emepụta akaụntụ Japan na Network PlayStation